नेपाल बैंकको एक अर्ब ७६ करोड ८५ लाखको एफपिओ आउँदै, कहिले र कसरी गर्ने आवेदन ? « Arthatantra.com
नेपाल बैंकको एक अर्ब ७६ करोड ८५ लाखको एफपिओ आउँदै, कहिले र कसरी गर्ने आवेदन ?
काठमाडौ । नेपाल बैंकले प्रिमियम मूल्यमा थप नयाँ साधारण सेयर (एफपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । सरकारको स्वामित्व ६२ प्रतिशत रहको बैङ्कले एफपिओको प्रस्ताव सहित फागुन २५ गते ५८ औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ ।
बैंकले हाल सरकारको कायम रहेको सरकारको सेयर संख्या नघट्ने गरि एक अर्ब ७६ करोड ८४ लाख ८५ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो । बैंक संचालक समितिले हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीमा एफपिओ जारी गरि नेपाल सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशतमा झार्न एफपिओ जारी गर्ने भएको हो ।
एफपिओ पश्चात बैंकको बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता चुक्ता पूँजी आठ अर्ब चार करोड २६ लाख रुपैँया रहेको छ । सरकारको सेयर विनिवेश गर्दा प्रकृया झण्झटिलो हुने भएकाले एफपिओ मार्फत सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउन लागिएको हो ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको वासलात पारित गर्नेदेखि लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभाले पारित गर्नेछ । सधारणसभा प्रयोजनको लागि बैंकले फागुन ९ देखि २५ गतेसम्म बैंकले बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ ।
एफपिओपछि कायम हुने पूँजीमा सरकारको सेयर स्वामित्व ६२ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने भने सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशतबाट बढेर ४९ प्रतिशत पुग्नेछ ।
सभाले एफपिओको निष्काशन गर्न अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण विधि, प्रकृया र मूल्य निर्धारण, धितोपत्र निष्कासन गर्ने बिक्री प्रवन्धक तोक्ने लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने भएको छ ।
बैंकहरुको ध्यान यता पनि जाने हो की !
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या तेह्रथुम । स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा
केही दिनमै तामाकोशीको दुई करोड ६४ लाख कित्ता आइपिओ खुल्दै
चरिकोट । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय जनता र अन्य सर्वसाधारणका लागि रु दुई अर्ब
अनिल शाहको नबिल बैंकमा घटुवा, सिइओ छाडेर डेपुटीमा नियुक्ति, का.मु. को जिम्मेवारी
काठमाडौं । आठ वर्ष अगाडी नै सिइओ भईसकेका अनिल शाह घटुवा हुदै पुनः नबिल बैङ्क